LILA GHANTESHWOR RAJGURU GHARANA - Arun K Subedi
LILA GHANTESHWOR RAJGURU GHARANA
एलएनजीले एकाबिहानै रामप्रसादको कोठा ढक्ढक्याएकोले एक पटक रामप्रसाद अलि हतास भयो । काठमाडौंमा घरपतिले डेरावालको ढोका ढक्ढक्याउनु भनेको विचरा डेरावालहरुका लागि यसै पनि शुभ संकेत होइन, त्यही माथि एलएन जस्तो गृहस्वामी । रामप्रसादलाई लाग्यो एलएनले तोकेको आचारसंहितामध्ये अन्जानमै भए पनि कुनै भंग भयो होला, काठमाडौंका डेरावालाहरुले घरपतिले तोकेको आचारसंहिता अन्तर्गत रहनुपर्दछ । नत्र आफ्नो तडितुम्वडी कसिहाल्नुपर्छ, रातविरात भन्न पनि पाइन्न । रामप्रसादले स्थितिलाई सहज पार्दै भन्यो – ‘उहाँ एलएन राजगुरुघराना ज्यू, गृहस्वामी ।’ रामप्रसादका दुबै साथीहरुले उठेर नमस्कार गर्दै परिचय दिए ‘हजुर म धनकुटा चौविसको बराल हुँ, म चाहिँ सप्तरीको अर्याल हुँ । धनकुटा चौविसका बराल त विजयपुरका सेन राजाहरुका राजगुरु थिए । पृथ्वीनारायण शाहले विजयपुर फत्ते गरेपछि त्यहाँका सेनराजाहरु सँगै भागेर चौविसतिर पसेका हुन् । ती सेन राजा पनि लिम्बु क्षत्रीय हुन् । ठकुरी क्षत्रीय हैनन् । त्यहाँ ठकुरी सेन नभएर लिम्बु सेनहरु छन् । वास्तवमा तिनीहरु नै त्यहाँका राजवंशहरु हुन् । सप्तरीका अर्यालहरु पनि शक्तिवल्लभ अर्यालका सन्तान हुन् । यी शक्ति बल्लभका पूर्खा पनि द्रव्यशाहका गुरु नारायण अर्जेलका सन्तान हुन् । द्रव्यशाहका पिता लम्जुङगे राजा यशोव्रह्म शाहका पालादेखि दरवारसँग रही शाहरुको सम्बन्धमा रहेर गुरु भई आएकाले पृथ्वीनारायण शाहले त्यहाँ विर्ता दिई पठाएका हुन् । तिमीहरु दुबै जना राजघरानासँग सम्बन्ध भएका वंशवृक्षमा पर्दछौं खुशी लाग्यो । हेर पृथ्वीनारायण शाहबाट किन अर्जेलहरुलाई विर्ता दिई त्यहाँ पठाए यसको पनि ठूलो रहस्य छ…’। रामप्रसादले जान्यो एलएन अविराम बोल्दै जानेछन् । उसले बीचमा बडो सर्तकताका साथ कुरा मोड्यो– ए विभू बाहिर हर्न बज्यो सायद गाडी आइसक्यो तिमीहरु मेरो अफिस गएर निलोफरलाई लिएर यी सामानहरु लिएर आइदेऊ बाँकी सयवटा कार्ड होलान् म आफैं लेख्छु । ए हजुर, मेरो विवाहको कार्य भइरहेको छ । साथीहरु सहयोग गर्न आएका । हजुरको नाममा कार्ड छ । यही टक्र्याउँ कि ?
राप्रसादको छोरो पनि भयो । समय पनि अलि महिना बित्यो । आज फेरि एलएनबाट बोलावट भयो । एलएनको बैठक कोठामा अलि हल्ला भइरहेथ्यो । रामप्रसाद बैठकमा पस्यो । ५ जना बसेर ‘मेरिज’ खेलिरहेका रहेछन् । एलएनले परिचय गराउँदै भने ‘ए ! रामप्रसाद नमस्कार गर । उहाँ अभिमानसिंह बस्न्यातको सन्तती, उहाँको एघारौं पुस्ता र अभिमानको तेस्रो पुस्ता ठ्याक्कै जोडिन्छ । उहाँका काकाले कस्मीरका राजा करणसिंहको साइनो पर्नेसँग विवाह गरेका छन् । उहाँको नाम ऋक्षेश्वरमान सिंह बस्न्यात । उहाँ पार्थिवेश्वरमणि दीक्षित, उहाँका ससुराली काशी नरेशका पुरोहित हुन् । उहाँ मान्यवरसिंह थापा अमरसिंह, भीमसेन, माथवरसिंह थापाहरुको खान्दान । उहाँका बाजेले प्रतापगढका राजघरानामा सम्बन्ध गास्नु भएको थियो । उहाँ हेरम्वनरसिंह कुँवर जंगबहादुरका पिता वालनरसिंह कुँवरका काका नै उहाँका पुर्खा थिए । उहाँकी जिजुमुमा पञ्जावका नरेश रणजीत सिंहकी ठूलीआमाकी नातिनी थिइन् । चारै जनाको वंश महिमा सुनाएपछि एलएनले उसको परिचय गराए– ‘ऊ भाइ आरपी के क्षत्री कलंकीका नृसिंहबहादुर वषतिका ज्वाइँ ।’ बल्ल यत्रो विविध विरुदावली पश्चात कुरा खुल्यो रामप्रसालाई बोलाएको । … कुरा के परेछ भने मेरिजको ठिनी रहेछ पचिस पैसा । चानचुनको अभावमा कहिले काहिँ गठबढ पर्दोरहेछ । एकदुई प्वाइन्टको तलमाथिले निकै मार्का पर्छ यसर्थ एलएनजीलाई चाहिएछ चानचुन । तर यो जमानामा मकैको गेडाले पनि मिल्न नसकेको तासे हिसावलाई काम लाग्ने चानचुन पैसा विचरा रामप्रसादले कहाँबाट निकालोस् । चानचुनको अभावमा कुरा निकैवेर अड्कियो । बल्लबल्ल ‘बीसको माल सो’ गरेर एलएनजीले हिसाव मिलाए । तै पनि उनलाई ४ प्वाइन्ट घाटै लाग्यो । अन्ततः खेल उठ्यो । काठमाडौंका खान्दानीहरुको खेल यस्तै हुन्छ ।